ဆေးရုံမှာ လုပ်အားပေး ရင်း ဝူဟန် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက် ခံခဲ့ ရတဲ့ အငြိမ်းစား ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာအဆုံးသတ် – Shwewiki.com
ကမ္ဘာ ကနေ ကြောက်လန့်နေရတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့က စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လက်ရှိအချိန်ထိ တိကျသေချာတဲ့ ကုသဆေးရှာမတွေ့သေးပါဘူး…ဒါ့အပြင် ကူးစက်နှုန်းကလည်း လျင်မြန်တာကြောင့် မြို့တွေကိုပိတ် လေဆိပ် တွေ မြို့အဝင်အထွက်တွေမှာပါ တင်းကြပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေရပါတယ်….
ဒီလိုတွေ ပြုလုပ်ထားပေမယ့် ကူးစက် ခံထားရတဲ့ လူနာတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမိသူတွေဆီမှာလည်း အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်က ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတာပါ…
အခုလည်းပဲ အငြိမ်းစားဆရာဝန်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ Liang Wudong ဟာလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး သေဆုံးခဲ့ရရှာပါတယ်….ဒေါက်တာ Liang Wudong ဟာ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်လာတာကြောင့် ဒေသတွင်းဆေးရုံကို သွားရောက်ပြ သရာမှ ဆေးစစ်လိုက်တဲ့အခါ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရကြောင်း သိရှိရတာပါ…
ဒေါက်တာ Liang ဟာ အသက်(၆၂)အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး Xinhua Hospital’s Department of Otolaryngology ဆေးရုံမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်…..ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးနောက် အဆိုပါဆရာဝန်ကြီးဟာ ဆေးကုသမှုတွေခံယူခဲ့ပေမယ့်လည်း သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်…..
ဒီလိုကူးစက်ခံခဲ့ရတာဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးမှာ ပြန်လည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ကူးစက်ခံခဲ့ရတာလို့ Hubei Xinhua Hospital ရဲ့ ကြေညာချက်တစ်ခုအရသိရပါတယ်….အငြိမ်းစားယူပြီး အေးဆေးနေလို့ရပေမယ့် မိမိအသက်ကို မငဲ့ဘဲ တာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ရင်း သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ အငြိမ်းစားဆရာဝန်ကြီးရဲ့ စိတ်ဓာတ်ဟာ တကယ့်ကို လေးစားစရာကောင်းလှပါတယ်…..
Source : People’s Daily, China
ကမ်ဘာ ကနေ ကွောကျလနျ့နရေတဲ့ တရုတျနိုငျငံ ဝူဟနျမွို့က စတငျဖွဈပှားခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈဟာ လကျရှိအခြိနျထိ တိကသြခြောတဲ့ ကုသဆေးရှာမတှသေ့ေးပါဘူး…ဒါ့အပွငျ ကူးစကျနှုနျးကလညျး လငျြမွနျတာကွောငျ့ မွို့တှကေိုပိတျ လဆေိပျ တှေ မွို့အဝငျအထှကျတှမှောပါ တငျးကွပျတဲ့ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုတှေ ပွုလုပျနရေပါတယျ….
ဒီလိုတှေ ပွုလုပျထားပမေယျ့ ကူးစကျ ခံထားရတဲ့ လူနာတှနေဲ့ ထိတှဆေ့ကျဆံမိသူတှဆေီမှာလညျး အဆိုပါဗိုငျးရပျဈက ကူးစကျပွနျ့နှံ့နတောပါ…
အခုလညျးပဲ အငွိမျးစားဆရာဝနျကွီး တဈဦးဖွဈသူ ဒေါကျတာ Liang Wudong ဟာလညျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျခွငျးကို ခံခဲ့ရပွီး သဆေုံးခဲ့ရရှာပါတယျ….ဒေါကျတာ Liang Wudong ဟာ နထေိုငျမကောငျးဖွဈလာတာကွောငျ့ ဒသေတှငျးဆေးရုံကို သှားရောကျပွ သရာမှ ဆေးစဈလိုကျတဲ့အခါ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျခံထားရကွောငျး သိရှိရတာပါ…
ဒေါကျတာ Liang ဟာ အသကျ(၆၂)အရှယျရှိပွီဖွဈပွီး Xinhua Hospital’s Department of Otolaryngology ဆေးရုံမှာ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့ဖူးသူဖွဈပါတယျ…..ရောဂါကူးစကျခံရပွီးနောကျ အဆိုပါဆရာဝနျကွီးဟာ ဆေးကုသမှုတှခေံယူခဲ့ပမေယျ့လညျး သဆေုံးသှားခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ…..
ဒီလိုကူးစကျခံခဲ့ရတာဟာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈတိုကျဖကျြရေးမှာ ပွနျလညျ တာဝနျထမျးဆောငျရငျး ကူးစကျခံခဲ့ရတာလို့ Hubei Xinhua Hospital ရဲ့ ကွညောခကျြတဈခုအရသိရပါတယျ….အငွိမျးစားယူပွီး အေးဆေးနလေို့ရပမေယျ့ မိမိအသကျကို မငဲ့ဘဲ တာဝနျပွနျလညျထမျးဆောငျရငျး သဆေုံးခဲ့ရတဲ့ အငွိမျးစားဆရာဝနျကွီးရဲ့ စိတျဓာတျဟာ တကယျ့ကို လေးစားစရာကောငျးလှပါတယျ…..